Daawo: C.wali Gaas shalay “Waa balan Inaanu la shaqayno Farmaajo, Madaxwaynaha Lugta yaan lagu dhegin” | KALSHAALE
Daawo: C.wali Gaas shalay “Waa balan Inaanu la shaqayno Farmaajo, Madaxwaynaha Lugta yaan lagu dhegin”
Sep 16, 2018 - 21 Aragtiyood
Garoowe ( kalshaale ) Madaxwaynaha Puntland Cabdiwali gaas ayaa horay u balan qaaday inuu la shaqayn doono madaxwaynaha Soomaaliya Maxamed Cabdiilaahi Farmaajo.
” Runtii Madaxwayne Farmaajo Waa nin wanaagsan, oo Soomaali Wanaagsan Gaadhsiin kara, oo Isbadal dhab ah uu dhici doono, Waxaa la rabaa in la taageero, waxaa la rabaa in lala shaqeeyo oo lugaha lagu dhegin, Hadii la mashquuliyo Muxuu qaban karaa, Kadibna waa la eedaynayaa, Eedaya markaas anaga ayaa leh “
Dadka Puntland anaga waxaa naga balan ah inaan kula shaqayno intaan halkaa joogto, Wanaaga aad Qabato ayaa Soomaali oo dhan deeqa “ Ayuu yidhi Gaaas.
Balse maanta Arintu sidaas way ka duwan tahay oo Wuxuu shirkii kismaayo kasoo saaray inay Wadashaqayntii u Jareen Dawladdii dhexe, Shalay haduu yidhi Lugaha yaan la qaban, Maanta Sow Gafuurka ma haysto Isagu ” Mudane Gaas dib isu dhegayso.
Akhyaarta ra'yigiina halkan ku qora (21)
Muxuu gafuur dhegi karaa irid walbo waa laga soo xiray. Hadda wuxuu kusoo aruuray kismaayo garoowe. Iyadana mardhaw waa laga soo xirayaa. Waad arki doontaa gaas oo godka jilicoow fuudka ku cabaayo.
Dad waxaa ugu liito ninmaan la tabeyn hadana rabo in la sheegsheego.
No more kursi masloxo.
Waxay doonaan ha sameeeyyaan Gaas iyo Beeshiisa Carabka la’ ee dh,dh,dha haysa.Ha u yeedhaan wixii Muqdisho ka jooga.Qarashka iyo dhibka ay nagu hayaan ayay nagala tagayaan.Waligood wax faaiidole laga hayokkkkkkkkkkkkk
Ninka sidaa sameeya ayaan nin raga u aqaan,laakiin Inangumeed ragii biilinayay hoos jooga,maba hadlikaro.Haduu hadlana waa Da,meer ciyay.Muxuu yeelikaraa dawlada Somaliyeed?
Kulba ninka ay isqabtaan dawlada Somaliyeed ayay u niikiyaan Gaas iyo Beeshiisu.
Jilbahaan ku haystaaye,hayga tagin yaa Carab ,Benu altahyaan,yaa Jabarti Benu khamis dheere.
Tii Bosaso ka dhacay ayaan xasuustaa.
Sow taad Gudabiirsay ahayd!
Darood Xamar ka saara..
Dhibay nagu hayaan..jkjkkkk
Hadaad Xamar u dhawaato waxaa tahay daanyeer Habargir ah aka Turdho.
Munaafaq aan xiniinyo rag lahayn oo internet ka barooranaya.
Gudabiirsay ayaa yaabay.
Farmaajo canbuulada iska dhexfadhi kolayba reer dameer dawlad marabaan
Dawla goboleedyada waxaan qabaa iney saxsan yihiin wax allaale wixii dalkan loogu deeqo hadeyba dhafeen xamar soo dulmimaaha inlayyiraah waxbo ma sameynkartaa dawlada dhexe la aanteed qofwaliba xaafadiisa ha xaadhxaadho wale inaan mooryaan meel ayqurmisay ayna magaala madaxda dalka noqoneen
Hooyadaa dalmida ka was mooryaanyahow.
C/wali Ma been ayuu ku hadlay imisa ayaa la sugayay dawlada federaalka lugaha maahinee cirbaha iyo fooda madaxa ayaa la isugu xirayaa bararaq ayay baratay iyo mooryaanimo sheekooyinka raqiiska kala taga mooryaan shaatiyo badan xaan cunaa
Bahal mooryaan waalagu qabtay magaca samaroon ayaa dooneysay in la bahdilo samaroon waa dad gob ah najis shaatiyo badan mooryaan
Hooyo la caayaba ma lihid oo waxaad tahay Ina Ugaadhsatato.
Waxaan ka hadlayaa dadka aanad aduu ka mid ka ahayn ee anuu aan ka midka ahay.Aka Samaale wayne.
Samaale waa qabiil u dhigma Aka Jabarti Xayraan.
Dadka Somaliyeed ee Gobta ah ayaan ka hadlayaa – maaha kuwa Tegreega u naageeya.
Qof kaftanka wax kayaqaan ayaa tahay mooryaanta daarood naceeb ayaa halakaa dhigay ee haku dayan hooyo lacaayo waxba soo kordhin mayso xanuunka mooryaanta haya iyo dhibkay somaliweyn ugeesteen gooray ahaataba wuuka soo bixi midkan waa habar gidir isqarinaya kuma dhaco inuu kula kaftamo isagoo habargidir ah cabsi majeerteen ama daarood ayay shaatiyada ubadalanayaan reerkan siwanaagsan ayaan ugaranayaa qaasatay mooryaanta habar gidir isaga iyo dabshid
Bahalkee tahay? Dawaco, dhurwaa, Libaax etc.
Ninyahow waa run caytamay waa nin laga badiyey.
Waxaan isqabadsiin waayey in dad iyo dalmida ka hadlayso hadana naxayb iyo olole Irir iyo Darood ugaarsato ah iyo nacayb SomaLi ka dhexwado.
Marmar waxaan is iraadaa waa dadka SomaLi isku diraan ku mushaar qaata, xitaa taariiqda Somalia been ka sheegtaa.
I am not sure in Somali tahay, afsomali
Cidkaste ku hadasha somali..
In kuu jawaabo maaha..
Adiga iyo mr bahal waxaad mid tihiin dadka qurbaha ku raagay ee moodaya in wali dagaalkii sokeeye socdo.
War niman yahow dhulkii soo fiiriya si aad u caafimaadaan.
Reer Muqdishow (Farmaajo iyo Kheyre) labo isku helimeysaan inaad kursi maslaxo dhaafisaan Majeerten, hadana loo juuqi waayo.
– Waxey ka taagantahey Xassan Shiikh ayaa noo dhaamey.
* Boowe nimaan qeylin looma juuqo.
Rag badan ayaa filahayey in reer Bari mudo 2 sano ah XISHOON DOONAAN.
Maseyr maaro maleh –
Adeer ! Xaley reer Tolkaa Mudullood ayaad Foox u shidey, diintaa ogol inaad walaalkaa sheegto wixiisa xun iyo wixiisa fiican.
Mudullood aan Xawaadle aheyn miyaa jiro.
Mariixaan waxey dalka Horjooge ka ahaayeen 21 × 4 haddaa = 25 sano
Majeerten = 1 sano ( C/rashiid)
Xageed ka keentey Majeerten ayaa hogaamiyo Daarood.
“” Wixii Taariikh ah waa xageena, wixii Faan ah waa xagiina.
Gaas kuma khasbana qofkii aan la shaqayn inuu la shaqeeyo. Shaqadu maaha in la iska daba saqleeyo hadaan taada iyo tan shacabka aad mataleyso dan laga gelin.Farmaajo inan layaalnimada ha ka baxo haddii uu doonayo in lala shaqeeyo
Mr Gaas waa naag dudmo badan
Ha KU adkaysto hadalkiisa
Imisaan u soon joogay tannoo kale
I sasaba camal I soon celiya.
Maanta Mr Bahal waad u gurmatay aniga waad iga eexatay.
Ma nin qabiil la jiran iyo aniga miis nawada saartay.
Kangaroo court iga dheh.
Gaas mighty Puntland ayuu xukumaa waa in xiriirka u jaro hadday niic ula yimaadaan Cali Baysteenka Xamar joogo.
Waad ka yara sokaysaa mr bahal hayeeshee qurbaha ayaad labadiinuba ku raagteen.
Mr bahal nin qabiilada aad u kala yaqaanna ayuu iska dhigaa balse wuxuu isqabadsiin waayey samaroon iyo samaale kii horeeyey.
kkkkkkkkkkk odaygii faroole ahaa ee jilifta lahaa markii uu xamar tegayay ma aragteen sidii muufo iyo macsaro loo siinayay siduu u xuub dhacasaday daaroodka filifta leh xamar ayaa lgu quudiyaa sidii qaxootigii al jaxiim kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Mr Bahal waa reer Galguduud/Mudug muxuu ka ogyahay Samaroon iyo Samaale.
Mise adagoo Adal Impire ka sheekaynaya ayaa aragtay oo Wikipedia iyo been isku walaaqaya.
Waa nin iga yaabiyey.